चासो देखाएनन् मोदीले संविधान संशोधनमा
काठमाडौँ । स्वदेश फर्किनुअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मुक्तिनाथ र पशुपति दर्शनबाहेकको समयमा खासगरी विभिन्न दलका नेताहरूसँगको छुट्टाछुट्टै र सामुहिक भेटघाटमा व्यस्त रहे। त्यही भेटका क्रममा उनले तराई केन्द्रित मुख्य दुई दलका नेताहरूलाई पनि भेटेका थिए। तर ती भेटमा उनले विगतमा जस्तो
प्रधानमन्त्री ओलीलाई बाबुरामको प्रश्न- कोट काट्ने बुद्धिजीवी कसलाई भनेको ?
काठमाडौँ । पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बुद्धिजीवीलाई ‘कोट काट्ने मुसा’ को संज्ञा दिएर अपमान गरेको बताएका छन् । अहिलेको दुनियाँ ज्ञान विज्ञानमा चलेको भन्दै यसरी प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले यस्तो कटाक्ष गर्न नसुहाउने उनको
मोदीले पूरा नगरेका पाँच वाचा
काठमाडौँ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले करिब चार वर्षपहिले आफू नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आउँदा धेरै वाचा गरेका थिए। कैयौं, दुई मुलुकको संयुक्त वक्तव्यमा लिपिबद्ध छन् त कति, तत्कालीन संविधानसभामा सम्बोधन गर्दा वा अन्य औपचारिक संवादका क्रममा उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्। यही शुक्रबार उनी
प्रधानमन्त्रीले भ्रम सिर्जना गरेको प्रचण्डको आरोप
काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकता विपरित अभिव्यक्ति दिएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा वुधबार पार्टी एकताबारे भएको भेटमा प्रचण्डले उक्त कुरा बताएका हुन् । प्रचण्ड निकट स्रोतका
मोदीको भ्रमण सफल बनाउन सबै लागौँ : मन्त्री पण्डित
अमरवाणी संवादादता/काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणलाई सफल बनाउनको लागि सरकारले कुनै कसुर बाँकी नराख्ने स्पष्ट पारेका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा मन्त्री पण्डितले मोदीको दुई दिने नेपाल
मोदीको स्वागत रक्षामन्त्रीले गर्ने
काठमाडौं/ नेपालको २ दिने राजकीय भ्रमणमा आउन लागेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले स्वागत गर्ने भएका छन् । नेपाल सरकारले जनकपुर विमानस्थलमा मोदीको स्वागतका लागि वरिष्ठ मन्त्री पोखरेलबाट हुने निर्णय गरेको हो । यसअघि प्रधानमन्त्री मोदीको नेपालको पहिलो भ्रमणमा
​यी हुन् प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत चार अध्यादेश
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभामा चारवटा अध्यादेश प्रस्तुत गरिएको छ । आजदेखि सुरु भएको संघीय संसदको दोस्रो अधिवेशनको बैठकमा अध्यादेश प्रस्तुत गरिएको हो । शिक्षा, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश, २०७५ राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७५, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको साझा प्रयासबाट समृद्धि : प्रचण्ड
पोखरा। नेकपा ‘माओवादी केन्द्र’ का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको साझा प्रयासबाट मात्र समृद्धि र विकास सम्भव हुने बताएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश नं ४ समितिका नवनिर्वाचित पदाधिकारी एवम् सदस्यको पदस्थापन समारोहमा उनले विकास, समृद्धि र स्थायित्वका लागि
७९ एसपी सरुवा
काठमाडौँ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले देशभरका ७९ जना प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक (एसपी) को सरुवा गरेको छ । प्रधान कार्यालयले निकालेको सरुवा सूचीअनुसार नेपाल प्रहरीमा महत्वपूर्ण मानिएको कर्मचारी प्रशासन महाशाखामा चन्द्रकुवेर खापुङ आएका छन् भने एसपी रेवती ढकाललाई पर्सामा पठाइएको छ । जिल्ला प्रहरी
आजदेखि संघीय संसद्को वजेट अधिवेशन, जेठ १ मा नीति कार्यक्रम
काठमाडौँ । संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन आजबाट सुरु हुँदैछ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार बैठक बस्ने गरी अधिवेशन आह्वान गरेकी हुन् । पहिलो अधिवेशन सकिएको करिब एक महिनापछि संघीय संसद्को दोस्रो अधिवेशन सुरु हुन लागेको हो । यस्तो छ कार्यसूची प्रस्तावित कार्यसूचीअनुसार
मार्क्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग गछौँ : संयोजक भट्टराई
अमरवाणी संवाददाता/काठमाडौँ । नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा.बाबुराम भट्टराईले आफ्नो पार्टीले माक्र्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग गर्ने बताएका छन् । साम्यवादी दर्शनका प्रणेता कार्ल माक्र्सको २०० औं जन्मदिवसको अवसरमा नयाँ शक्ति पार्टीले शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यलयमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई
एमाले–माओवादी एकता घोषणा हुन मात्र बाँकी : प्रचण्ड
अमरवाणी संवादाता/काठमाडौँ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमाले–माओवादी एकता घोषणा गर्नमा बाँकी भएको बताएका छन् । करिब–करिब एकता खाकाँ तय भइसकेको भन्दै अब पार्टी नेतृत्व त्यस्तो मोडमा आइपुगेको छ, कि पछि हट्ने अवस्था नै छैन्, त्यसैले कुनैपनि हालतमा पार्टी एकता भइछाड्ने उनले उद्घोष गरे । शुक्रबार
एमाले–माओवादी एकतामा मोदीको सद्भावः भट्टराई
काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले एमाले–माओवादी केन्द्रबीचको एकता हुनेबित्तिकै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहिलो शुभकामना आउने दाबी गरेका छन् । मोदी र ओलीको सम्बन्ध निकै मजवुद भएको भन्दै दुई पार्टीबीचको एकता छिट्टै घोषणा हुने र त्यसमा भारतको साथहुने उनले जिकीर गरे । उनले
सुरक्षाको मुख्य चुनौती अस्थिरता चाहने शक्तिः गृहमन्त्री थापा
हेंटौडा । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले विभिन्न नाममा अस्थिरता चाहने शक्ति सुरक्षा चुनौतीको रूपमा रहेको बताएका छन् । प्रदेश ३ स्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा सहभागी हुन मंगलबार हे‌ंटौडा आएका उनले सञ्चारकर्मीसंग कुरा गदै उनले ‘समानान्तर सरकार खडा गर्ने नाममा’ र धर्म, जातिका नाममा राजनीतिक अस्थिरता पैदा
टेलिकम र नेविसंघबीच निःशुल्क सिम वितरण रोक्ने सहमति
अमरवाणी संवाददाता/काठमाडौँ । अखिल क्रान्तिकारीले नेपाल टेलिकमको निःशुल्क सिमकार्ड वितरण गरेपछि टेलिकमको विरोधमा उत्रिएको नेपाल विद्यार्थी संघ र टेलिकमबिच सहमति भएको छ । नेपाल टेलिकमलाई राजनीतिकरण नगर्न नेविसंघको २४ घण्टे अल्टिमेटम थियो । बिहिबार टेलिकमले आफ्नो योजनामा परिमार्जन गर्ने भएपछि सहमति
प्रचण्डको गुन तिर्दै टेलिकमकी कामिनी
अमरवाणी संवाददाता/काठमाडौँ । अखिल क्रान्तिकारीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय विशेष समितिको पहलमा नेपाल टेलिकमको निःशुल्क सिमकार्ड वितरण गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघको केन्द्रीय समितिले बुधबार नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ
अाज लोकतन्त्र दिवस, विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै
काठमाडौँ । तेह्रौँ लोकतन्त्र दिवस विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी आज देशभर मनाइँदैछ । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आन्दोलनरत दलको मार्गचित्रबमोजिम विसं २०५९ जेठ ८ गते विघटन भएको संसद् विसं २०६३ वैशाख ११ गते पुनःस्थापना गरेका थिए । संसद् विघटनपछि सशस्त्र द्वन्द्वका कारण निर्वाचन हुन सकेन । निर्वाचन
यातायात व्यवसायी कम्पनी ऐनअन्तर्गत नआए सरकारले विकल्प खोज्ने
अमरवाणी संवाददाता/काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले तीन महिनाभित्रै कम्पनी ऐनअन्तर्गत यातायात व्यवसायीहरू नआए आफूहरूले बाध्य भएर वैकल्पिक व्यवस्था अपनाउने चेतावनी दिएका छन् । सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री महासेठले उक्त चेतावनी
ब्यानरमा लेनिनको तस्बिर छुटेपछि...
काठमाडौँ । आइतबार एमाले र माओवादी मिलेर गरेको संयुक्तसभा कार्यक्रममा ब्यानरको लफडा भयो । उक्त कार्यक्रममा पार्टी एकता गर्न लागेका दुई दलले संयुक्त रूपमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रममा थियो । तर,कार्यक्रम सुरु नहुँदै विवाद भयो । लेनिन दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमको बोर्डमा लेनिनकै तस्बिर थिएन । कम्युनिष्ट
जुरेन घोषणाको मिति, पार्टी एकता हल्ला मात्रै !
काठमाडौँ ९ वैशाख । एमाले अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पार्टी एकता घोषणाको मिति जुराउन असफल भएका छन् । वैशाख ९ गते पार्टी एकता गर्ने भनेर मिति तय गएिको थियो । ओली र प्रचण्डबीच तीन दिनदेखि लगातार ‘वान टु वान’ वार्ता हुँदा पनि विवादित विषय कुनै सहमति
‘पार्टी एकता नहोस् भनेर केहीले बोका भाकल गरेका छन्’
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका स्थायी कमिटि सदस्य केशब बडालले एमाले–माओवादी केन्द्रबीचको एकता नहोस् भनेर केहीले दक्षिणकालीमा कालो बोका भाकल गरेको आरोप लगाएका छन् । शनिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेता बडालले एकता प्रक्रियामा केही विलम्ब हुँदा केही मानिसहरूको मन र भावना कुँडिएको बताए । उनले भने,‘केही
स्थापना दिवसकै दिन राजपा फुट्यो
काठमाडौं । मधेश केन्द्रित राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) उपाध्यक्ष अशोककुमार यादवले नयाँ पार्टी राष्ट्रिय जनता पार्टी (लोकतान्त्रिक) को घोषणा गरेका छन् । शुक्रबार उनीहरुले पार्टी घोषणा गर्दै महाधिवेशन नहुन्जेलसम्मको लागि ११ सदस्यीय तदर्थ समिति समेत गठन गरेका छन् । तदर्थ समितिको संयोजकमा अशोक कुमार